Hướng dẫn cách cập nhật Windows 10 và khắc phục các sự cố khi cập nhật | Muasalebang - Muasalebang
Hướng dẫn cách cập nhật Windows 10 và khắc phục các sự cố khi cập nhật | Muasalebang
Đang Đọc: Hướng dẫn cách cập nhật Windows 10 và khắc phục các sự cố khi cập nhật | Muasalebang in Muasalebang
1 Ukuze kwandiswe ukuvikeleka nokuletha izici ezintsha ezisebenziseka kalula, i-Microsoft ngezikhathi ezithile ikhipha izibuyekezo ze-Windows 10. Udinga ukwazi ukuthi ungazibuyekeza kanjani futhi uzifake kanjani lapho kudingekile. Isihloko esilandelayo sizokuqondisa ukuba wenze lokho.
1.1 kuqalaImiyalo yokuthi ungayibheka kanjani inguqulo yamanje:
1.2 2Ukubuyekeza mathupha:
1.2.1 Ukusebenzisa i-Windows Update
1.2.2 Ukusebenzisa i-Windows Assistant
1.3 3Buyekeza ukulungisa iphutha
1.3.1 Khipha izibuyekezo
1.3.2 Setha kabusha i-PC yakho
1.3.3 Isiqalo esisha
Ukuze kwandiswe ukuvikeleka nokuletha izici ezintsha ezisebenziseka kalula, i-Microsoft ngezikhathi ezithile ikhipha izibuyekezo ze-Windows 10. Udinga ukwazi ukuthi ungazibuyekeza kanjani futhi uzifake kanjani lapho kudingekile. Isihloko esilandelayo sizokuqondisa ukuba wenze lokho.
kuqalaImiyalo yokuthi ungayibheka kanjani inguqulo yamanje:
Ukwazi ulwazi lwenguqulo kanye nemisebenzi yenguqulo yamanje kusiza ukuzizwisa kwakho lapho usebenzisa IWindows kwandiswe. Futhi, ukwenza kube lula kuwe ukuthi ulandele njengoba iMicrosoft ikhipha a inguqulo ebuyekeziwe okusha.
Ukuze uhlole inguqulo yakho yamanje, landela lezi zinyathelo:
Isinyathelo 1: Beka isikhombisi segundane ebhokisini losesho lokuthi Cortana futhi ngenisa “Inguqulo ye-Windows“.
Isinyathelo sesi-2: Khetha Ulwazi Lwesistimu ohlwini lwemiphumela.
Isinyathelo sesi-3: Ewindini elivelayo, uzobona lonke ulwazi lwesistimu. Ulwazi Lwenguqulo Inguqulo etholakala ngezansi nje kwe Igama le-OS.
Ngokuvamile, i-Windows 10 izokwenza isibuyekezo esizenzakalelayo ngemuva ukuze wenze isiqiniseko sokuthi ikhompuyutha yakho ingaphakathi inguqulo yakamuva.
Ukuvala izibuyekezo ezizenzakalelayo zeWindows:
Isinyathelo 1: Cindezela inhlanganisela yezinkinobho IWindows + ishibhile bese ufaka igama elingukhiye “gpedit.msc” ku-Run ibhokisi lengxoxo.
Isinyathelo sesi-2: Khetha Inqubomgomo yeqembu lendawo.
Isinyathelo sesi-3: Ku-interface Umhleli Wenqubomgomo Yeqembu Lendawosesha ngekheli Ukucushwa Kwekhompyutha > Izifanekiso Zokuphatha > Izingxenye zeWindows > I-Windows Update.
Isinyathelo sesi-4: Chofoza kabili Lungiselela Ukuvuselelwa Okuzenzakalelayo ebhokisini Izwe ilungelo.
Isinyathelo sesi-5: Efasiteleni elivelayo, khetha Khubaza > Faka isicelo. Khetha Kulungile ukuqedela ukufakwa.
Uma ufuna ukuqapha isibuyekezo eduze, qhubeka ngezindlela ezimbili:
Ukusebenzisa i-Windows Update
I-Windows Update iyithuluzi elitholakala ohlelweni lokusebenza lwe-Windows elenza ukubuyekezwa kwenzeke kululafuthi abasebenzisi bangabuyekeza buyekeza umlando ukuqala isichibi lapho kudingeka.
Xem Thêm Top 5 phần mềm tăng tốc máy tính hiệu quả nhất trên máy tính | Muasalebang
Izinyathelo okufanele uzithathe:
Isinyathelo 1: Vula iwindi Qala bese uchofoza isithonjana “cog”. Izilungiselelo (Izilungiselelo) ekhoneni elingezansi kwesokunxele kwesikrini.
Isinyathelo sesi-2: Efasiteleni Izilungiselelokhetha Ukubuyekeza Nokuphepha (Isibuyekezo Nokuphepha).
Isinyathelo sesi-3: Iwindi I-Windows Update ivuliwe. Cindezela inkinobho Bheka Izibuyekezo (Hlola izibuyekezo). Ngaleso sikhathi, uhlelo luzobheka inguqulo yamanje ehlinzekwa yi-Microsoft nenguqulo yamanje kukhompyutha yakho, kanye ukulanda ngokuzenzakalelayo isibuyekezo esidingekayo.
Shintsha amahora okusebenza:
Lapho usebenza noma udlala imidlalo futhi angifuni Ukuvuselelwa kweWindows manje, ungasebenza shintsha isikhathi sokubuyekeza ngentando. Bese ukhetha Amahora Okusebenza okwakho (max Amahora angu-18) futhi iWindows izozibuyekeza ngokuzenzakalelayo ngaphandle kwaleso sikhathi, iqinisekise ukusetshenziswa okungaphazamiseki kwekhompyutha yakho.
Kungenjalo ungaqhubeka Izilungiselelo ezithuthukile ku Ihlehlisa isibuyekezo (ubuningi izinsuku ezingu-35), noma thola ngokuzithandela umlayezo wokuqalisa umshini wokuqedela isibuyekezo.
Ukusebenzisa i-Windows Assistant
Windows Assistant iyithuluzi elinikezwa yi-Microsoft ukusiza abasebenzisi khetha inguqulo yakho ye-Windows ukuze ubuyekeze. I-Windows Assistant isebenziseka kalula ngoba I-interface enembilekulula ukuyisebenzisa, ngesikhathi esifanayo ukwenza inqubo hlola inguqulo IWindows ngaphambi kokubuyekeza.
Ukuze ubuyekeze usebenzisa i-Windows Assistant, landela lezi zinyathelo ezilula:
Isinyathelo 1: Landa i-Windows Assistant ekhompyutheni yakho.
Isinyathelo sesi-2: Vula ifayela elilandiwe ukuze ufake esibonakalayo Windows 10 Buyekeza Umsizi.
Uma inguqulo yamanje isivele ingeyakamuva, uzothola umyalezo othi “Siyabonga ngokubuyekezela enguqulweni yakamuva ye-Windows 10“(Siyabonga ngokubuyekezela enguqulweni yakamuva ye-Windows 10).
Isinyathelo sesi-3: Uma hhayi okwamanje inguqulo yakamuva, hlala ubukele ulwazi lwenguqulo leyo Windows Assistant enikezayo futhi ayikhethe Buyekeza manje ukwenza isibuyekezo.
Inqubo yokubuyekeza izokwenza zenzeka ngemuvaayithinti ngokuphelele inqubo yakho yokusebenza kukhompyutha.
Isinyathelo sesi-4: Ngemva kokuqedwa kokubuyekezwa, uzothola isaziso Qala kabusha (Qalisa kabusha). Kuleli qophelo kufanele gcina konke umsebenzi wakho futhi Qala kabusha, noma ungakhetha Qala kabusha kamuva.
3Buyekeza ukulungisa iphutha
Inqubo yokubuyekeza ayihlali ihamba kahle. Ezinye izibuyekezo Akuhambisani ngenguqulo yamanje ye-Windows noma izinkinga ziyavela phakathi nenqubo yokufaka izoshiya amaphutha athile athinta abasebenzisi.
Xem Thêm So sánh các phiên bản windows 10: Windows 10 Home và Pro | Muasalebang
Kuya buyekeza ukulungisa iphuthaungakwenza ngezindlela ezilandelayo:
Ngemuva kokuthi isibuyekezo sesiqediwe, ohlelweni lokusebenzisa, uma kuphakama izinkinga, ungakhipha izibuyekezo ezidala amaphutha ngezinyathelo ezilandelayo:
Isinyathelo 1: Vula Qala bese ukhetha isithonjana “cog”. Izilungiselelo (Ukusetha).
Isinyathelo sesi-3: Iwindi I-Windows Update ivuliwe. Cindezela inkinobho Buka umlando wokubuyekeza (Bheka umlando wokubuyekeza).
Khetha Khipha izibuyekezo (Khipha izibuyekezo) efasiteleni elivelayo.
Isinyathelo sesi-4: Khetha inguqulo esanda kubuyekezwa kakade wenze iphutha ukuqala khipha. Qiniseka ukuthi ucwaninga inguqulo kahle ngaphambi kokuyisusa.
Setha kabusha i-PC yakho
Enye indlela “Setha kabusha i-PC yakho“, kulula ukuqonda, kuzokusiza ukuthi ubuyele isimo sokuqala sokusetha okuzenzakalelayo. Le ndlela ikuvumela ukuba susa noma gcina idatha yomuntu siqu kudivayisi yakho, kanye nezishayeli nesofthiwe yesistimu.
Isinyathelo 1: Vula Qala bese ukhetha isithonjana Izilungiselelo (Ukusetha).
Isinyathelo sesi-2: Khetha Ukubuyekeza Nokuphepha (Isibuyekezo Nokuphepha) uma amawindi Izilungiselelo avele.
Isinyathelo sesi-3: Khetha into Ukubuyisela (Buyisela) kumenyu engakwesokunxele.
Khetha inkinobho Qalisa ngaphansi kwesigaba Setha kabusha le PC.
Isinyathelo sesi-4: Izinketho Gcina amafayela ami (gcina idatha yomuntu siqu) noma Susa konke (susa konke). Uma usukhethiwe, inqubo Setha kabusha kuzokwenzeka ngokuzenzakalelayo.
Ku-Recovery, ungaphinda ukhethe into Buyela emuva kunguqulo yangaphambilini ye-Windows 10. Lo msebenzi ngeke gcina ukusetha isimo kanye nedatha ekhona nezinhlelo zokusebenza, usizo kuphela buyela enguqulweni ye-Windows ngaphambi kokubuyekezwa.
Okwamanje, nge Isibuyekezo sabadaliuzoba nenketho eyodwa ngaphezulu yokulungisa amaphutha e-Windows, okungukuthi Isiqalo esisha. Ukuqala okusha kuzosiza abasebenzisi ukususa isofthiwe efakiwe futhi bagcine idatha yomuntu siqu, efana ncamashi ne “Setha kabusha i-PC yakho“, kodwa elula futhi ngokushesha kuhlangene kakhulu.
Isinyathelo 1: Chofoza kwesokudla kusithonjana I-Windows Defender Security Center (I-Windows Defender Security Center) kubha Ibha yomsebenzi bese ukhetha Vula. Ungaphinda uthayiphe ibha yokusesha ye Cortana ngegama elingukhiye I-Windows Security futhi uyivule.
Xem Thêm Page file là gì? Có nên tắt nó nếu như máy tính có nhiều RAM | Muasalebang
Isinyathelo sesi-2: Ku-interface IWindows Defender Securitykhetha “Ukusebenza kwedivayisi nempilo” (Impilo Yedivayisi nokusebenza).
Ku Ukusebenza kwedivayisi nempiloyiya esigabeni Isiqalo esisha bese ukhetha Ulwazi Olwengeziwe.
Isinyathelo sesi-3: Leli windi lizochaza ngokucacile ukuthi kuzokwenzekani ngemva kokwethula isici Isiqalo esisha.
Ngokuqondile, i-Windows 10 izofakwa kabusha futhi ibuyekezelwe enguqulweni yakamuva. Idatha yomuntu siqu nezilungiselelo ezithile zesistimu, kanye nesofthiwe ehlobene nezinhlelo zokusebenza, kuzosuswa. Uma usuqedile ukubuka, cindezela Qalisa.
Isinyathelo sesi-4: Iwindi Isiqalo esisha izovela, cindezela Olandelayo ukuqala inqubo yokuhlola inguqulo.
Ngemva kokuhlolwa, uhlu Izinhlelo zokusebenza nesofthiwe kususiwe izovela. Lolu hlu luzoba Londoloza Kudeskithophu ngemva kokuthi Ukuqala Okusha kuqedile. Ungathembela kulolu hlu ukuze uqhubeke faka kabusha ezinye izinhlelo zokusebenza ezibalulekile.
Uma konke sekumi ngomumo, cindezela Olandelayo > Qala ukuqala.
Uma ungathuthukeleli enguqulweni Yokubuyekeza Abadali, usengasebenzisa umsebenzi Wokuqalisa Okusha ngokwenza okulandelayo:
Isinyathelo 1: Vakashela isixhumanisi esilandelayo ukuze ulande Vuselela Amathuluzi EWindows.
Isinyathelo sesi-2: Vula uhlelo lokusebenza, ngemuva kokufunda imigomo yokusetshenziswa ngokucophelela, chofoza Yamukela Ukuze uqinisekise.
Isinyathelo sesi-3: Ku-interface elandelayo, uzoba nenketho Gcina amafayela omuntu siqu kuphela (gcina idatha yomuntu siqu kuphela) noma lutho (susa yonke idatha). Khetha into edingekayo bese ucindezela Qala ukuqala.
Amathiphu okuhlanza idrayivu yakho ukuze uthole isikhala esanele sokufakwa kwesibuyekezo:
Uma i-PC isizophuma ngaphandle kwesikhala kungenalutho, ngeke ukwazi ukuqhubeka nenqubo evamile yokubuyekeza futhi kungenzeka wenze iphutha isibuyekezo siphazamisekile. Ngemuva kwalokho kuzoba nomlayezo ku-pop-up ukukukhumbuza lokho Uhlelo ludinga isikhala esengeziwe ukufaka isibuyekezo.
Uzoba nenketho Khulula isikhala (khulula isikhala) kudrayivu C: noma Xhuma idivayisi yokugcina yangaphandle (xhuma idivayisi yokugcina yangaphandle).
Uma ukhetha khulula isikhalangicela ukhalise inkinobho Khulula Isikhalalokhu kuzokuyisa efasiteleni Isitoreji kwe Izilungiselelo futhi ukhombise inani lesikhala samahhala idrayivu yakho enaso.
Khetha idrayivu C: futhi Hlanza manje ukususa amafayela okungadingekile.
Uma idrayivu yakho ingenaso ngempela isikhala esanele sokubuyekeza nakuba ukhulule amafayela angcolile, ungakhetha xhuma idivayisi yokugcina yangaphandle.
Manje udinga idivayisi efana ne-USB, ikhadi le-SD, noma i-hard drive ephathekayo, … bese uxhuma kukhompuyutha. Bese kuvela uhlu, khetha idivayisi efanele yokugcina bese ukhetha thiếp tục ukuze uqhubeke nenqubo yokubuyekeza.
Qaphela, idivayisi yokugcina yangaphandle kufanele okungenani ube nayo 4 GB (khuthaza 16 GB) ayinalutho ukuze ilungele ukulanda futhi ifake isibuyekezo.
Ngethemba ngalesi sihloko, uzokwazi ukuthi ungabuyekeza kanjani Windows 10 kanye nokulungisa izinkinga ngemva kokubuyekeza!
LINE là gì? Tìm hiểu đặc điểm và tính năng nổi bật của ứng dụng LINE | Muasalebang
TOP 4+ mẫu laptop dưới 10 triệu tốt nhất 2021 bạn nên mua | Muasalebang